Tsy tetikady fampiroboroboana Influencer io, atsaharo! | Martech Zone
Tsy tetikady fampiroboroboana Influencer io, atsaharo!
Asabotsy Jolay 22, 2017 Alatsinainy Janoary 18, 2021 Douglas Karr
Betsaka ny tabataba ao amin'ny media sosialy ka sarotra indraindray ny manaraka. Tiako ny zava-misy fa manana mpanaraka marobe amin'ny Internet aho ary manandrana mandray anjara sy mamaly izay rehetra mangataka. Rehefa orinasa nifandraisako teo aloha dia manokana fotoana aho ary mamaly mifanaraka amin'izany.
Izany dia nilaza fa misy paikady mahatsiravina manomboka ny fisongadinana an-tserasera izay mandany ny fotoanako amin'ny hafatra mivantana sy hafatra kendrena. Ny orinasa dia mamoaka fangatahana manokana ho ahy toa ilay etsy ambany mba hahafahako mamaly na mizara amin'ny mpihaino ahy. Tsy azoko antoka na mandeha ho azy na voatazona amin'ny tanana izy ireo, saingy manelingelina - ary nampahafantariko azy ireo izany.
Ity misy ohatra iray etsy ambany. Mahazo taonina ihany koa aho amin'ireo orinasa samihafa amin'ny alàlan'ny hafatra mivantana sy mailaka koa. Nesoriko ny anaran'ny masoivoho satria matetika izy ireo dia manolotra atiny tena tsara mifandraika amin'ny mpihaino anay. Ity bitsika etsy ambany ity; na izany aza, tsy iray amin'ireo hafatra ireo. Tsy niresaka momba ny Snapchat aho, tsy nangataka ny torohevitr'olona momba ny Snapchat, ary tsy miraharaha ireo Snapchat aho endri-javatra farany.
Fa maninona no tetikady fampidiran-tsaina mahatsiravina ity?
Ity dia mpaka sary manokana sy mivantana izay nanintona ny saiko hiala tamin'ny asako hafa. Ilaina ny fametrahana mailaka amin'ny mailaka, azoko atao ny mamerina mijery azy ireo amin'ny fotoako ary mamaly na mamafa fa ilaina. Ity ny fampitahana (azo tanterahina):
Scenario A: Mipetraka eo amin'ny latabatra miasa aho, ary misy mailaka marobe miditra. Miaraka amin'ny feo hafa dia misy hafatra hafa avy amin'ny mpanjifa sy ny vinavina. Tsy misy amin'ireo mpandefa manantena ahy hamaly eo noho eo anefa. Rehefa mahazo manamarina mailaka aho dia mijery azy ireo ary mamaly mifanaraka amin'izany.
Scenario B: Mipetraka eo amin'ny latabako miasa aho, ary manelingelina ahy ianao, anontanio aho raha liana amina lohahevitra tsy mbola noresahiko taminao mihitsy. Ankehitriny, ny ankamaroan'ny olona manelingelina ahy dia manana zavatra lehibe angatahina mba hahafantatra fa sarobidy ny fotoako ary ny loharano izay kely fotsiny. Tsy handeha fotsiny izy ireo.
Ity karazana lasibatra ity dia manafoana ny lanjan'ndriko ary manalavitra ahy amin'ireo olona te-hiresaka amiko na mila ny fanampiako.
Raha heverinao fa paikady marketing influencer marina ity - manatratra sy manelingelina ahy mandritra ny tontolo andro - diso ianao. Azafady mba manaja ny fotoanako. Raha manantona ahy manokana amin'ny media sosialy ianao dia ataovy izany rehefa manokatra varavarana amin'io resaka io aho. Raha tsy izany dia apetaho fotsiny ny hafatrao toy ny mahazatra - tsy asio marika manokana aho.
Mba hiara-miasa amin'ny influencers dia mila manangana fifandraisana aminay ianao. Mila matoky aho fa mitady izay hahasoa ahy ianao ary tsy hanao vivery ny aiko ireo mpanara-dia ahy. Ity dia tsy hoe paikady marketing influencer.
Tags: marketing marketinghaino aman-jery sosialybitsikahafatra twitter
LegalZoom dia mampihatra ny faharanitan-tsaina amin'ny alàlan'ny Veritone One
Paikady 7 hampitomboana ny firosoana amin'ny Instagram